सगरमाथाको उचाइ नाप्न आफै कस्सिँदैछ नापी विभाग - Samadhan News
सगरमाथाको उचाइ नाप्न आफै कस्सिँदैछ नापी विभाग
समाधान संवाददाता २०७५ माघ २७ गते ७:४७
‘चारमध्ये दुई जना टुप्पैसम्म पुग्नेछन् दुई जनाले चाहिँ आधार शिविरमा रहेर काम गर्ने छन्, नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।
कत्तिको उत्साहित छन् प्राविधिकहरू ?
‘उहाँहरू २२-२३ देखि ५२ वर्ष उमेरको हुनुहुन्छ। प्राविधिकदेखि इन्जिनियर र अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मले चासो देखाउनु भएको छ, नापी विभागका निर्देशक एवं सुचना अधिकारी दामोदर ढकालले बीबीसीसँग भने।
कौतूहल हुन सक्छस् नेपालको पहिलो आफ्नो सगरमाथा नापी अभियानमा के महिला कर्मचारी वा प्राविधिकले पनि चासो देखाएका होलान् ?
जबाफमा ढकालले भने, ‘आवेदन दिनेहरूमा महिला पर्नु भएको छैन।’
नेपालकै पहिलो सगरमाथाको उचाइ मापन अभियानमा शेर्पा आरोहीहरूको भूमिका के होलारु महानिर्देशक भट्टका अनुसार खुला बोलपत्र आह्वान गरेर आरोहण गराउने र व्यवस्थापन गर्ने आरोहण कम्पनीको छनौट गरिनेछ।
‘शेर्पा आरोहीहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उहाँहरुको साथ सहयोग र मार्गदर्शनमा नै हाम्रो आयोजनाको सफलता निर्भर रहनेछ, भट्टले भने।
तर उनले बीबीसीसँग भने, ूविदेशीले नापिसकेका छन्। अब नेपाल आफैँले गर्न लागेको नापी टोलीमा म आफैँ पनि सहभागी हुन पाए त्यो मेरो लागि गौरवको विषय हुनेछ।ू
कसरी अघि बढ्दैछ नापीको काम ?
नापीको आरोहण टोलीलाई शिखरमा पुर्‍याउने जिम्मा एउटा नेपाली आरोहण कम्पनीलाई दिँइदैछ। शेर्पा आरोहीको साथ र सहयोगमा नापीका प्राविधिक टुप्पैसम्म पुग्नेछन्
सगरमाथा उचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागले गत वर्ष दुई करोड रुपैयाँ पाएको थियो। ‘यो वर्ष त्यो बढेर १५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो र त्यसपछि नापीको कामले गति लिएको हो, महानिर्देशक भट्टले भने।
भट्टले अहिलेसम्म सगरमाथा उचाइ मापनको ४० प्रतिशत काम भइसकेको बताए। ‘अहिले हामीले गुरुत्व सर्भेका साथै गणितीय तथा समतलन सर्भे गरिरहेका छौँ। सिराहको मदारदेखि सोलुको पताले लगायत १०-१२ ठाउँमा काम भइरहेको छ। गुरुत्व सर्भेका लागि १०० भन्दा बढी स्थानमा काम भइरहेको छ।’
‘त्यसपछि हामी भारत र चीन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नापी विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै नापीको परिणाम सार्वजनिक गर्छौँ। त्यसो गर्दा हामीले सार्वजनिक गर्ने सगरमाथाको नयाँ उचाइलाई विश्व समुदायले स्वीकार गर्नेछ।’
नेपाल आफैँले नाप्नुपर्ने कारण
भूगर्भविद्हरूचाहिँ हिमालय क्षेत्र मुनितिर रहेको भूगर्भमा भारतीय र युरेशियाली प्लेटको हलचल जारी रहेको र त्यसले गर्दा हिमालयको उचाइ बढिरहने हुन सक्ने ठान्दछन्। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा सन् १९९९ मा अमेरिकाको न्याशनल जिओग्राफिक सोसाइटीले जीपीएसको सहयताले सगरमाथाको उचाइ ८,८५० मिटर रहेको निष्कर्ष निकालिदियो। त्यसलाई नेपालले स्वीकार गरेन।
नापी विभागका महानिर्देशक भट्ट भन्छन्, ‘यो वैज्ञानिक काम हो। वसन्त ऋतुमा हामी आरोहण गर्न सफल भयौँ भने हाम्रो सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने र भिडाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी मापनको नतिजा निकाल्छौँ।’